Health & Beauty Archives - Lifestyle Myanmar
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေအားလုံးက စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားရစေဖို့ မခဲယဉ်းပါဘူး။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါ၊ နိုင်ငံရေးမငြိမ်မှု စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတာက အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးက စိတ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ရမှာ မဟုတ်ပါလား? စိတ်ဖိစီးမှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘာ့ကြောင့် သက်ရောက်တာလဲ? သင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းလမ်းတွေကို ဆရာဝန်တွေက...
ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီးတွေ အသက်ဘယ်လောက်ပဲကြီးလာ ကြီးလာ ဘယ်အချိန်ပဲ ကြည့်ကြည့်လှပနေလို့ အားကျနေတယ်မလား။ သူတို့မှာက ကျွမ်ကျင်တဲ့အလှဖန်တီးရှင်တွေရဲ့ အကူအညီရယူနိုင်သလို ပျိုမေလေးတို့တွေလည်း အခြေခံကျတဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမဲ့ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့် ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် လှပနေစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ၁။ Sunscreen နေ့တိုင်းလိမ်းပါ SPF ၃၀ အောက် မနည်းတဲ့ Suncreen တွေကို နေ့တိုင်းလိမ်းပေးခြင်းက ကျန်းမာလှပတဲ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်ဖို့...
ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းလာတဲ့ ကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ
ကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို အမြဲသတိပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထိုင်များသော ဘဝပုံစံများ၊ ပုံမှန်ဖိစီးမှုတွေနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကြီးအကျယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာ စားပွဲခုံပေါ်မှာထိုင်တယ်၊ အိမ်ပြန်လာကြတယ်၊ တီဗွီကို ချက်ချင်းဖွင့်တယ်။ အများစုက လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ကြဘူး။ နေရာတိုင်းကို ကားနဲ့ပဲသွားကြတယ်။ ကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို သိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်ပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် အချိန်မတန်မီသေဆုံးခြင်းကဲ့သို့သော...
အချိုစားသုံးမှု အာသာပြင်းပြခြင်းကို လျှော့ချပေးတဲ့ အစားအစာ (၅)မျိုး
အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက သကြား၊ အရသာမှုန့်နှင့် အရည်အသွေးနိမ့်အဆီတွေ ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ စိတ်လိုက်မာန်ပါ စားသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရမပေးတဲ့အပြင် အဆီမြန်မြန်တတ်စေပါတယ်။ သို့သော် အချိုစားသုံးမှု တပ်မက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးတဲ့ အစားအစာများရှိပါတယ်။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ စားသုံးမိခြင်းကို တကယ်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အချိုများ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က သူတို့အားလုံးမှာ သဘာဝအချိုဓါတ်တွေ ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။...
သင့်အရေပြားကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက် တစ်ရှူးတွေရဲ့ ဆိုးကျိုး (၆)ခု
ပင်ပန်းလာတဲ့နေ့တွေမှာ မိတ်ကပ်တွေကို တစ်ရှူအစိုနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်တာက အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ မိတ်ကပ်ဖျက်တစ်ရှူးတွေကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဟာ သင့်အရေပြားကို အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေပြီး ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဖျက်တစ်ရှူးတွေဟာ သင့်အရေပြားကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ၆ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြတာကြောင့် အလှအပချစ်သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ် တစ်ရှူးအစိုတွေမှာ သင့်မိတ်ကပ်ကို...
အရပ်ပိုရှည်၊ ပိုကြီးထွားလာစေဖို့ ဖြည့်စွက်စားပေးရမယ့် အစားအစာ(၈)မျိုး
အရပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်ခြင်းက လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအပါအဝင် အားသာချက်တွေများစွာရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရပ်အမြင့်က သင့်ရဲ့မျိုးရိုးဇီဇအပေါ်မှာ မူတည်ပေမယ့်လည်း သင့်သားသမီးတွေရဲ့ အမြင့်ကို တိုးမြှင့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ကလေးတွေနှင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း (HGH)ကို တိုးမြှင့်ခြင်းက ၎င်းတို့ကိုပိုမိုမြှင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။ HGH ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အတွက် သင်စားနိုင်သောအစားအစာတွေရှိပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးသောအဆင့်တွေမှာ ကျန်းမာသောအစာအမျိုးမျိုးစားခြင်း၊ သကြားကို ရှောင်ခြင်းနှင့် အလေးချိန်ကို သင့်လျော်သောအဆင့်မှာထားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။...
ချွေးပေါက်တွေကို ပိုပြီးပိတ်သွားအောင်လို့ သင်ပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှားများ
မျက်နှာပေါ်ကအရေပြားပေါ်မှာ ချွေးပေါက်လေးတွေဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီချွေးပေါက်လေးတွေက ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ အသားအရေကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် အဆီပြန်တာတွေ၊ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ချွေးပေါက်လေးတွေကပိတ်ဆို့သွားပြီး ဝက်ခြံတွေဖြစ်စေဖို့အခွင့်အလမ်းပိုပြီးတော့ များလာစေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ချွေးပေါက်တွေကိုပိတ်စေမယ့်လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ မျက်နှာကိုကိုင်တွယ်နေတတ်တဲ့အကျင့် မျက်နှာကိုလက်နဲ့ကိုင်နေတတ်တဲ့ အကျင့်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိုပြီးတော့ များသွားပါပြီ။ လက်ဆိုတာ ဘက်တီးရီးယားတွေအများဆုံးကပ်တွယ်နေနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်တာကြောင့် မျက်နှာကိုခဏခဏ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ချွေးပေါက်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပိတ်ဆို့ပြီးဝက်ခြံတွေကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။...
သာမန်အအေးမိဖျားနာခြင်းတွေကို ကူညီတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် အစွမ်းထက်အစားအစာများ
လောကတွင် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာနေကြသည့် သက်ရှိအားလုံးသည် အအေးမိခြင်းကို တိမ်းရှောင်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ အအေးမိဖျားနာခြင်းဖြစ်ချင်သည့်အခါ ပြတတ်သည့် လက္ခဏာများမှာ လည်ပင်းနာခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အဖျားအနည်းငယ်ရှိခြင်း နှင့် မကြာမကြာ ခေါင်းကိုက်တတ်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်သည် အားနည်းလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းလာပြီး အလုပ်ပျက်၊ ကျောင်းပျက်ခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် အအေးမိဖျာနာခြင်းကြောင့် အလုပ်ပျက်၊ အစားပျက်အဖြစ်မခံရဘဲ...
ဈေးနည်းပေမယ့် အဖိုးမနည်းတဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ စွမ်းပကားများ
အသားကိုလှီးလိုက်ရင် အတန်ငယ်ချွဲပျစ်ပျစ်ရှိတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေဟာ အချိန်အခါမရွေး ဈေးတွေထဲမှာ အမြဲရှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ စားလို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေဟာဆိုရင် မျက်စိအားကို အင်မတန်ကောင်းစေတယ်လို့ လူကြီးတွေပြောစကားကို ငယ်စဥ်ကတည်းက ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကို အကျိုးပြုစေတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေက တခြားဘယ်လိုမျိုး ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သေးလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က Jilin Medical ဂျာနယ်က ရုံးပတေသီးကို သုတေသနလုပ်ထားတဲ့...